दोर्दी खोलाको आईपीओ बाँडफाँट, भाग्यमानी कतिले पाए शेयर ? - Nepal Bahas Nepal Bahas
दोर्दी खोलाको आईपीओ बाँडफाँट, भाग्यमानी कतिले पाए शेयर ?
प्रकाशित मिति : ८ असार २०७९, बुधबार ११:०५
८ असार, काठमाडौं । दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ ८ असार बुधबार बाँडफाँट भएको छ । यसमा गोलाप्रथामार्फत दुई लाख एक हजार ९८६ जना सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले शेयर पाएका छन् ।